Tuulada Dhuurre ee Mudug oo markii ugu horreysay uu gaaray tallaalka Jadeecada
(ERGO) - Khadiijo Shuuke Faarax waxaa markii ugu horreysay toddobaadkii hore loo tallaalay carruurteeda oo labo ah. Tallaalka cudurka jadeecada oo laga fulinayo deegaannada gobolka Mudug ayaa gaaray tuulada Dhuurre oo 65 km u jirta magaalada Gaalkacyo. Ololahan oo billowday 30-kii Abriil ayaa dib uga dhacay afar maalmood oo loo qorsheeyay, kaddib markii ay dadku abaarta uga guureen meelihii ay deggenaayeen.
Khadiijo waxay Raadiyo Ergo u sheegtay in carruurta loo tallaalay ay yihiin gabar hal sano jirta iyo wiil saddex jir ah. Kama aysan labalabeyn qaadashada tallaalka maxaa yeelay cudurka wuxuu ku dhacay 2 carruur ah oo ay deris yihiin. “Shaqaalaha caafimaadka waxay ii sheegeen in tallaalka ka hortag mooyee uusan daawo lahayn, sidaas daraaddeed waxaan go’aansaday inaan carruurteyda ka badbaadsado,” ayay tiri.
Madaxa caafimaadka isbitaalka Koonfurta Gaalkacyo, Farxiyo Maxamed Ciise ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay in deegaanka Dhuurre uu ka mid yahay meelaha ugu daran gobolka Mudug ee ay jadeecada ka jirto. Labadii bilood ee u dambeysay oo keliya 50 carruur ah oo cudurka uu soo ritay ayaa laga keenay oo isbitaalka uu diiwaangeliyay.
Mahad Caabbi Ciise oo ah u qaabilsanaha tallaalka jadeecada ee wasaaradda caafimaadka Galmudug ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in iyaga oo ka jawaabaya faafista cudurka ay kooxo fuliya tallaalka u direen degmooyinka Gaalkacyo iyo Hobyo iyo tuulooyinka hoostaga sida Wargalo, Docol, Saddex-Higlo, Wisil, Gawaan, Dagaari, Dhuurre, Ceel-guula, Bitaale ilaa Bandiiradley iyo Gallinsoor. Wuxuu xaqiijiyay inay howsha tallaalka ka caawisay hay’adda UNICEF. Waxaa ilaa hadda la tallaalay 15,000 oo carruur ah oo ka mid ah 20,000 ee la beegsanayo.
“Carruurta ugu badan ee ay jadeecada ku dhacday waa kuwa ay qoysaskooda ka barakaceen abaarta,” ayuu yiri. Sidaas daraaddeed waxay ku dadaalayeen inay dadka ugu tagaan meelihii ay u barakaceen, maaddaama ay la socdaan carruur badan oo aan horay loo tallaalin.
Dadka qaar oo deegaannadoodii ka barakacay markii ay abaarta saameysay waxaa tallaalka lagu gaarsiiyay meelihii ay tageen. Laakiin Khadiijo Shuuke inkastoo ay abaarta uga dhinteen 42 ari ah haddana ma barakicin oo siddeed neef oo u hartay oo aan wax nafci ah u lahayn balse ay quudiso ayay ku haysataa Dhuurre. Hooyadan oo keligeed korsata carruurta oo aabbahood ay kala tageen ayaa ku tiirsan dhaqaale ay ka hesho dukaan ay bagaashka ku iibiso.
Kooxaha caafimaadka waxay sameeyeen wacyigelin ka hor intii aysan tallaalka billaabin, taas oo fududeysay in waaliddiin badan ay oggolaadaan in carruurtooda la tallaalo. Cabdinuur Warsame Cigaal oo ku nool Dhuurre ayaa Raadiyo Ergou sheegay inay kooxaha tallaalka u sheegeen inay jadeecada naafeyso carruurta aan la tallaalin. Aabbahan waxaa loo tallaalay toddobo ka tirsan tobankiisa carruurta ah. Wuxuu rajo ka muujiyay in ololahan uu wax ka qabto cudurka oo toddobaadyadii u dambeeyay si aad ah ugu faafayay deegaankan.